अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? वैज्ञानिकले निकाले यस्तो निष्कर्ष – PathivaraOnline
Home > समाचार > अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? वैज्ञानिकले निकाले यस्तो निष्कर्ष
काठमाडौं । अण्डालाई मांशाहारी खानेकुरा नमान्ने मानिसहरु पनि दुनियाँमा धेरै छन् । अर्थात् कतिपय आफुलाई शाकाहारी भन्नेहरुले पनि अण्डा खाने गर्दछन् । आखिर अण्डा शाकाहारी हो कि मांशाहारी रु यस विषयमा मानिसहरुले लामो समयदेखि नै बहस गर्दै आएका छन् । तर वैज्ञानिकहरुले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएका छन् कि जसले अण्डा मांशाहारी कि शाकाहारी भन्ने बहसलाई अब अन्त्य गरिदिनेछ ।
अण्डामा तिनवटा प्रष्ट तह हुन्छन् । पहिलो बाहिरी बोक्रा, दोश्रो सेतो भाग र तेश्रो पहेँलो भाग । सेतो भाग प्रोटिनको निकै उत्कृष्ट श्रोत हो । त्यसमा प्राणीको कुनै हिस्सा नहुने भएकाले अण्डाको त्यो भाग पूर्णरुपमा शाकाहारी हो ।
भर्खरै आयो सिके राउतको यस्तो खबर
यी हुन् आज त्रिशुलीमा गाडी खस्दा ज्यान गुमाएकि आमा र बे,पत्ता छोरी